Manidina voalohany | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | soso-kevitra, Tsangatsangana, Flights
Misy foana ny fotoana voalohany ho an'ny zava-drehetra ary ny sidina dia tsy ho ambany. Manoloana ny mety hisian'ny sidina voalohanyMiankina amin'ilay olona ny fahatsapana sasany: ny fahatoniana tanteraka manoloana ny trangan-javatra toy izany, ny fitaintainanana, ny tahotra hanidina, fanina sns.
Fantatsika fa ny sidina voalohany dia tsy mora foana, amin'ny Actualidad Viajes dia tianay ny hahatanteraka bebe kokoa an'io traikefa io ary ambonin'izany rehetra izany, mailo kokoa mba tsy hanadino zavatra manan-danja ary handeha soa aman-tsara amin'ny dia.
1 Vidio ny tapakilanao
3 Fahatongavana amin'ny seranam-piaramanidina
Vidio ny tapakilanao
Mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra, amin'ny fotoana voalohany azonao atao ny manankina izany andraikitra izany a masoivoho fitsangatsanganana za-draharaha hikarakara ny rehetra fitantanana ny fividianana tapakila. Raha ny mahazatra dia lafo kokoa noho ny raha ataonao ao anaty a 'an-tserasera' Fa ity fomba ity farafaharatsiny mba hahazoana antoka fa mahita ny fiaramanidina marina ianao ary hampahafantatra anao ny zava-drehetra alohan'ny sidina ihany koa izy ireo.
Raha mankany amin'ny toerana tsy misy daty miverina ianao, dia tsy mila mividy tapakila tokana. Raha mandeha miaraka amin'ny daty miverina eo ianao nefa tsy raikitra, dia azonao atao ny mandray tapakila miverina misokatra. Io dia ahafahanao miverina ny fiaramanidina mety indrindra amin'ny andro sy ora azonao. Mazava ho azy, tsy maintsy mampahafantatra ny tenanao ianao aloha, raha misy toerana malalaka ho anao. Raha manana daty miverina mazava sy raikitra ianao dia afaka mividy tapakila tokana sy tapakila miverina amin'ny fotoana iray.
Ny tsara indrindra dia valizy iray fotsiny no tokony hivezivezinao. Misy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka mamela anao hitondra valizy roa nefa tsy misy vidiny fanampiny, na izany aza, ny ankamaroany, indrindra ireo izay heverina ho zotram-piaramanidina 'mora', ny fitaterana ihany no navelany valizy iray hafa.
Tetika iray hialana amin'ny fakana toerana be loatra amin'ny valizy dia ny fanaovana akanjo maivana, kiraro kiraro indrindra, ary mitafy akanjo mavesatra na mafana indrindra amin'ny fotoana fitsangatsanganana. Amin'izany fomba izany dia azonao antoka fa mameno valizy iray fotsiny ary mitondra akanjo mafana miaraka amin'izay raha ilaina izany.
Ao amin'ny kitapo tanana, no iray izay hiraikitra aminao mandritra ny dia, apetrakao ny fitaovana lehibe indrindra sy marefo, toy ny finday, ny laptop na takelaka raha sendra misy filàna, fakan-tsary sns. Aza adino fa fady ny mitondra fitaovam-piadiana sasany toy ny fikapohana fantsika, hety, tweezer, sns. Ity lisitr'ireo "entana voarara" ity dia matetika no faritana isaky ny masoivohon'ny seranam-piaramanidina.
Fahatongavana amin'ny seranam-piaramanidina
Na dia toa mampivarahontsana aza izany dia tsy maintsy tonga any amin'ny seranam-piaramanidina adiny 3 farafahakeliny amin'ny sidinao raha sidina iraisampirenena izany ary adiny roa eo ho eo mialoha raha avy amin'ny taninao manokana. Ary maninona no ela be mialoha? Noho ny habetsaky ny fomba tsy maintsy hataonao raha vao tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina ianao: fisavana, fidirana, fifindra-monina ary fomba amam-panao sns.
Aza mitondra tsy misy vy Raha resaka fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra no ahafahany manemotra anao loatra.
Zahao ny antsipiriany momba ny tapakila: Fotoanan'ny sidina sy ny laharana ary ny vavahady fidirana ity.
Fotoana hanaovana ny 'Chek-In': Roa minitra fotsiny (raha tsy misy tsipika). Tsy maintsy asehonao eo amin'ny kaontera ny kaompaniam-pitateranao ny pasipaoronao sy / na ny karatrao, ho lanjaina ny valizy, homena safidy ianao eo anelanelan'ny lalana na ny varavarankely ary ny voila! Ho vonona ny hiroso amin'ny dingana manaraka ianao.
Fandefasana: Rehefa omenao anay ny pass pass dia afaka miditra amin'ilay faritra izahaymankany amin'ny seranam-piaramanidina aiza Miditra amin'ny fiaramanidina isikaAtaovy ao an-tsaina fa raha vao miditra amin'ity faritra amin'ny seranam-piara-piaramanidina ity ianao dia tsy afaka miverina any ivelany, ka tonga ny fotoana hanaovana veloma miaraka amin'ireo niara-dia taminao teny amin'ny seranam-piaramanidina na miandry ireo olona hafa hiaraka aminao. Ao amin'ny efitrano fialana dia ho hitanao ny faritra fantatra amin'ny hoe 'Duty free' (fananganana ara-barotra ny entana tsy misy haba amin'ny haba), ahafahanao mividy ny zava-drehetra manomboka amin'ny akanjo ka hatramin'ny zava-pisotro misy alikaola ary na inona na inona vidinao any dia tsy handoa hetra amin'ny haba. Aza adino fa ao amin'ny faritra tsy misy olona ianao ary tsy andoavan-ketra.
Rehefa manakaiky ny fotoana handehanana amin'ny fiaramanidina dia mandehana mitady ny varavaranao na 'Vavahady', hita eo amin'ny pasiteranao. Raha vantany vao eny amin'ny fiaramanidina ianao dia mila manaraka fotsiny ny torolalan'ny mpikarakara ny sidina ary milamina hatrany. Raha matahotra be ny manidina ianao dia mieritrereta haka karazana fanamaivanana fanaintainana mba hatory sy / na hialana sasatra mandritra ny sidina.
Mahafinaritra ny manidina!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Manidina voalohany
Hotely 5 any Espana misy hatsarana sy rendrarendra
Petra, tanàna malaza an'i Jordania